၂၇ ကြိမ် DEADLY ILLUSIONS သည် NETFLIX တွင်အသံအနိမ့်ဆုံးရုပ်ရှင်ဖြစ်ခဲ့သည် - သတင်း
၂၇ ကြိမ် Deadly Illusions သည် Netflix တွင်အစဉ်အဆက်ဖန်တီးခဲ့သောအရှိဆုံးအရာဖြစ်သည်
Netflix အပေါ်သေစေနိုင်သော Illusions ။ အလို။ ငါ့အသက်ရှုဖို့ခဏလောက်ငါလိုအပ်တယ်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်ထူးဆန်းတဲ့၏တိုတောင်းသောအချည်းနှီးသက်သက်သာဖြစ်ခဲ့သည်, သင်တိုင်းအစစ်အမှန်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်မဟုတ်ပါဘူးဘာမေးခွန်းထုတ်ကျန်ရစ်အခါတိုင်း။ ဒါဟာအခွံမာသီး, ငါ Netflix ကမှာငါတို့ကဒီကိုလိုအပ်ထင်သူမသေချာဘူး။
အဆိုပါရုပ်ရှင်များတွင်အရောင်းရဆုံးစာရေးဆရာ Mary Morrison ၏ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြသည်။ သူမသည်သူမ၏ရောင်းအားအကောင်းဆုံးနံပါတ်သို့နောက်ထပ်စာအုပ်ထပ်ထည့်ရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါသူသည်ကလေးများကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ရန်အတွက်ကလေးထိန်းရန်သူမလိုအပ်သည့်ပမာဏကိုဟန်ချက်ညီစေရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ သူမသည်ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းငှားရမ်းထားသည်။ ထိုပုံမှန်အဆုံးသတ်ဘယ်မှာအကြောင်းပါပဲ။
ဖြစ်ပျက်နေသောအရာများသို့မဟုတ်မဖြစ်နိူင်သည့်ကိစ္စများ၊ ပြင်းထန်သောဆက်ဆံရေးများ၊ လူသတ်မှုများ၊ အလံနီများတပ်ဆင်ခြင်းများပြီးနောက်တွင် ရိုင်းများနှင့်ရှုပ်ထွေးဇာတ်သိမ်း အားလုံးကိုချွတ်ရန်။ ဤတွင် Deadly Illusions သည်စာသားအရသံများမှထွက်ပေါ်နေသည့်အချိန်နှင့်တစ်စုံတစ် ဦး ကဤအရာကိုအစောပိုင်းကဖန်တီးထားခြင်းကိုရပ်တန့်သင့်သည်။
1. မာရိရုံသူမ၏နှစ်သန်းဒေါ်လာကမ်းလှမ်းတဲ့စာတစ်စောင် '' မမြင်ရ ''
ညာဘက်ရုပ်ရှင်ရဲ့အစမှာမာရိရဲ့ခင်ပွန်းတွမ်ကတုန်လှုပ်ချောက်ချားစရာတစ်ခုခုလုပ်ခဲ့ပြီးငွေအမြောက်အများဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ် (စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတာကသူတကယ်လုပ်ခဲ့တာကိုငါတို့ဘယ်တော့မှရှာမတွေ့ခဲ့ဘူး) ။ ထုတ်ဝေသူများကမာရိဆီသို့လာပြီး အကယ်၍ သူသည်သူမ၏စီးရီးထဲမှအခြားစာအုပ်တစ်အုပ်ရေးရန်သဘောတူပါကသူမ၏ကမ်းလှမ်းချက်ကိုဖော်ပြသည့်စာတစ်စောင်ပေးသည်။
တွမ်အိမ်ပြန်ရောက်လာပြီးစာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူမကသူတို့မေရီကိုဒေါ်လာနှစ်သန်းကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ အဲဒါကို Mary ကလုံးဝမသိခဲ့ဘူး။ သေချာတာပေါ့။ သင်ရုံသင်သည်ထိုစာကိုဖတ်ရှုနှောင့်ရှက်မပြုခဲ့? ကမ်းလှမ်းချက်ကိုတန်ဖိုးရှိမည်မျှစစ်ဆေးရန်မစဉ်းစားခဲ့သလဲ မဟုတ်ဘူး။
၂ 'ငါရေးတဲ့အချိန်မှာငါဟာတခြားသူတစ် ဦး ဖြစ်သွားတယ်'
ဤရုပ်ရှင်သည် ယခုအချိန်မှစ၍ အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ရူးသွပ်သွားလိမ့်မည်ကိုကျွန်ုပ်သိပါသည်။ မာရိနည်းနည်းပြင်းထန်စွာလွန်းပြင်းထန်စွာကင်မရာသို့ကြည့်သူရေးသားခဲ့သည်သည့်အခါသူမကတစ် ဦး တစ်ခုလုံးကိုစာအုပ်ရေးသားခြင်းကိုစတင်အကြောင်းကိုအပြည့်အဝကောင်းစွာသိ။ သူမတစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားသောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ရဲ့ပြောပါတယ်လမ်းကို, အရာအားလုံးထိန်းချုပ်မှုထဲကလိမ်မကြာမီကြောင်းကိုသဘောပေါက်သည်။
အခြားမည်သူမဆိုဂရေ့စ်သည်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောဖြစ်ရပ်များဖြစ်ခဲ့ရသည်၊ အချိန်တိုင်းတီးခတ်ခဲ့သောထိပ်တန်းတေးဂီတများမှဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်၊ သူမမာရိတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သောအခြား nannies များကဲ့သို့ဖြစ်မည်မဟုတ်ကြောင်းတစ်နည်းနည်းဖြင့်သိရုံသာမကသူမနှင့်သင့်အားနှုတ်ဆက်သည့်အခါ Huntsman Enterprises မှဖြစ်ရမည်။ တစ်စုံတစ် ဦး အားသင့်အိမ်တံခါးဝတွင်ဟုတ်ကဲ့ပြောရန်အခွင့်အလမ်းဘယ်တော့မျှပေးမည်မဟုတ်၊ သင့်အားသူတို့ထံမှကုမ္ပဏီကိုပြောပြပြီးသက်သေအထောက်အထားကိုတောင်းခံခွင့်ပြုသည်။ လူတိုင်း, ဒီသိတယ်?
ပြီးသား Grace အရိပ်ကြောင်းပြောပြနိုင်ဖြစ်ခြင်းပြီးနောက်သူမ၏အင်တာဗျူးအတွက်သူမအစွဲအလမ်းများကဲ့သို့စကားလုံးများကိုလှည့်ပတ်ပစ်ရဲ့နှင့်စစ်မှန်တဲ့ creepy ပြင်းထန်သောအပြုံးဖြစ်ဒီထူးဆန်းလွန်းသည်။ မိနစ်ပိုင်းအတွင်းသူမသည်ကလေးများနှင့်အကြီးအကျယ်ပါ ၀ င်ပတ်သက်နေပြီးသူတို့နှင့်စကားပြောနေသည်။ မေရီကိုရုံးခန်းထဲခေါ်သွားပြီးဂရေ့စ်သည်စာရေးဆရာတစ် ဦး ၏ရှေ့မှောက်၌ရှိနေခြင်းအပေါ်တွင်အပြည့်အဝ fangirl mode ကိုသွားသောအခါ - ဤသည်မဟုတ်ကြောင်းကိုနောက်ဆုံးအရိပ်အမြွက်ဖြစ်သင့်သည်။ FANGIRL ဘယ်တော့မှငှားမှာမဟုတ်ဘူး။
အမှုအရာပြီးသားအရမ်းပြင်းထန်လာနေကြသည်, အရာအားလုံးအနီရောင်အလံဖြစ်ပါတယ်။ ဂရေ့စ်သည်မာရိထံမှအလွန်သေးငယ်သောရေချိုးကန်ငယ်များကိုချေးယူပြီးသူမရဲ့ရှေ့တွင်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောင်းလဲသွားသည်။ ဒါ့အပြင်သူမကကလေးတွေကိုရေကူးတာ ၈၀ ကျော်တဲ့အေရိုးဗစ်စာသင်ခန်းမလုပ်ဘူး၊ ထိုအခါဂန္နှေးနှေး mo သည်ရေကန်အပြင်သို့ ထွက်၍ ပြင်းထန်သောရေကင်မရာအကူးအပြောင်းနောက်သို့လိုက်သည် - သင်ဒီမှာစတင်နေပြီဖြစ်သည်ကိုသင်သိသည်။
5. ရဲ့တစ်နေ့သူတို့တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားလူသိများချင်ပါတယ်သည့်အခါမေရီ Grace ဘရာစီယာစျေးဝယ်ယူတဲ့အခါမှာတန်ဖိုးထားဖို့ခဏယူကြပါစို့
မေရီကသူမ၏ထိန်းအသစ်သောဘရာစီယာစျေးဝယ်ထွက်နေစဉ်တစ်ရက်အတွင်းပေါ်လာသည်ဆိုသောကြောင့်မည်သည့်အချိန်ဇယားရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်လုံးဝသေချာမသိပါ။ ????? သူမသည်မာရိအတွက်သူမ၏ဘရာစီယာကိုတင်၏နေစဉ်သူမသည်အထက်သို့ခါးကနေစာသားကာလတုန်းကမရခဲ့ဘူးအဝတ်စဖြစ်၏။ ဘေးထွက်မှတ်စု - ဤနေရာတွင်မိခင်ရောကလေးထိန်းပါပါ ၀ င်ပါကမည်သူသည်ကလေးများကိုစောင့်ရှောက်နေသနည်း။
6. ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းရုံညအချိန်တွင်မာရိနဲ့ Tom ရဲ့အိပ်ခန်းထဲသို့လမ်းလျှောက်
အရာအားလုံးအားလုံးယခုနည်းနည်း toooooo လိုက်တယ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမာရိကကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းရဲ့ထိပ်တန်းငေးစိုက်ကြည့်နှင့်အတူစတင်ခဲ့ပြီး, ယခုသင်မာရိသငျသညျသတိရလျှင်ဒေါ်လာနှစ်သန်းတန်ဖိုးရှိအစည်းအဝေး, ၌ရှိ၏, သူမစဉ်းစားစဉ်းစားအားလုံးအသစ်သောထိန်းဖြစ်ပါတယ်?
8. '' သူမတစ် ဦး ကတစ်မိနစ်သူမကအပြစ်မဲ့ကလေးငယ်င်လာမည့်တစ်မိနစ်သူမကဒီမာစတာ seductress င် ''
ဒီလိုင်းတစ်ခုတည်းကဖမ်းဆီးရမိတဲ့ပြစ်မှုဖြစ်တယ်။ ထို့နောက် Mary က Grace သည်သူမ၏လိင်အစေခံကျွန်နှင့်တူသည်ဟုပြောခဲ့သည်။ ဘာလဲ?!
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီမိသားစုကသူတို့အိမ်ထဲဝင်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့မိန်းမနဲ့ကလေးတွေကိုယုံကြည်မှုအကြောင်းစာသားအရမသိကြဘူး။ သူမသည်သူမအသက်ဘယ်လောက်မသိရသလဲ မာရိကသူမသောက်ရန်လုံလောက်သောအဟောင်းရဲ့ရှိမရှိစစ်ဆေးဖို့ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူမအစဉ်မပြတ်သူမ၏အဝတ်အချည်းစည်းပုံဖော်ခံရဖို့လုံလောက်တဲ့ဟောင်းရဲ့လျှင်မေးခွန်းထုတ်မပေးပါလျှင်, ငါကဒီမှာသွားအချို့သောကြီးမားသောပြissuesနာများရှိပါတယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းမတိုင်မီသူမကဒီမှာကဒီမှာအိမ်မှာပိုပြီးခံစားခဲ့ရဘယ်တော့မှရဲ့ပြောနေမပြိုကွဲမီ, မာရိကဒီနည်းနည်းအများကြီးကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းနှစ်ရက်ကဲ့သို့ဤနေရာတွင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး အခုတော့သူမအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာသူမလည်ပင်းပေါ်မှာနို့စို့တာကိုပြနေတယ်။ ချစ်တယ် ထိုအခါမူကား tbh, ဒီမာရိရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်း၌ရှိ၏သို့မဟုတ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလဲ ဘယ်သူသိနိုင်မလဲ။
ငါမြင်နေငါဘာမှအစစ်အမှန်ဘဝသို့မဟုတ်လျှင်အားလုံးမာရိရဲ့ ဦး ခေါင်း၌ရှိမရှိလျှင်ငါ kinda မေးမြန်းတာပါ။ တစ်ခုခုကိုလမ်း, Grace သူမ၏များအတွက်ရေချိုး prepping ရှိရာမြင်ကွင်းတစ်ခုနဲ့တူ shit လိုက်တယ်ဖြစ်ကြသည်။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်သေစေနိုင်သောထင်ယောင်ထင်မှား ??? ဒီဟာကဒီမှာဖြစ်ပျက်နေတာလား ??? သူမရေးတဲ့အချိန်မှာသူမစိတ်ထဲမှာသူမနဲ့အတူပြေးနေလို့သူမဤအရာအလုံးစုံကိုစိတ်ကူးယဉ်နေပါသလား။ ငါရုပ်ရှင်တစ်ခုလုံးအက်ပြီလားဒါမှမဟုတ်ဒီအချိန်မှာရုပ်ရှင်တစ်ခုလုံးငါ့ကိုအက်လိုက်ပြီလား ??? ကျွန်တော်မသေချာဘူး။ အကူအညီပို့ပါ
၁၂။ ဂရေ့စ်သည်မိမိသားကိုဆွဲ ယူ၍ ရိုက်ယူသောအခါတွမ်ဘာကြောင့်ဘာမျှမပြောခဲ့သနည်း။
လူတိုင်းကသူတို့ဘယ်လောက်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာပြသတဲ့ရုပ်ရှင်တစ်ခုလုံးမှာအမည်မဖော်လိုကြတာသေချာပါတယ်၊ သူတို့ကလေးတစ်ယောက်ကမာရိရဲ့စာအရေးအသားခန်းထဲဝင်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းသူ့ကိုမှာရိုက်, သူ၏လက်မောင်းကိုဆုပ်ကိုင်နှင့်ရှင်းလင်းစွာဖြစ်စဉ်တွင်သူ့ကိုနာကျင်။ တွမ်စာသားပဲအဲဒီမှာရပ်နှင့်ဘာမျှမဖြစ်ပျက်နဲ့တူကလျှောပေးနိုင်ပါတယ်?
အမှန်စင်စစ် Deadly Illusions နှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်အနှောင့်အယှက်အရှိဆုံးအချက်မှာပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းပြီးသာမာန်မိသားစုတစ်စုသည်သူတို့ကလေးများကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လုံးဝဘာမျှမသိသောအမျိုးသမီးကိုခွင့်ပြုမည့်ကွက်လပ်ဖြစ်သည်။ ဂရေ့စ်သည်သူမအသက်အရွယ်အားလုံး ၀ ငြင်းခုံရန်ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးသူမအနေဖြင့်သူမနှင့် ပတ်သတ်၍ မည်သည့်အရာကိုမဆိုမသိပါ။ အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ ဟုတ်တယ် သူမ?
ဒါ့အပြင်အကယ်စင်စစ်ဒီသူတို့ထံမှသူမ၏ငှားရမ်းကုမ္ပဏီနှင့်အတူပုံစံအချို့ကိုမျိုးပေါ်ရဲ့အရာမျိုးဖြစ်သနည်း ဒီတစ်ခုလုံးရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘာဖြစ်စဉ်မှမရှိတာပြanနာမရှိဘူးလား။ ဒါတွေအားလုံးဘယ်လိုဖြစ်ပျက်ခဲ့သလဲ။ သင့်ရဲ့ကလေးထိန်းမှုကအံ့သြစရာကောင်းပြီးထူးဆန်းနေလျှင်သင်သူမကိုဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်သည်။
ငါဤအချက်အားဖြင့်ကျနော်တို့ပရိသတ်ကိုမှန်ကန်သောအရာကိုအဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးရှိသည်ဘယ်မှာအကြိမ်ပေါင်းများစွာအပေါင်းတို့နှင့်ပတ်သက်။ စဉ်းစားရန်ခဏယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်နှင့်ဤဒါခေါ် Deadly Illusions ဘာတွေလုပ်နေလဲထင်ပါတယ်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်အခုငါဘယ်လိုခံစားရလဲ။ ကျွန်တော်မသေချာဘူး။ ဒီဟာကတကယ့်ဘဝလား
၁၅။ အိုးကိုသွားပြီး Tom နဲ့လည်းဆက်သွယ်ပါ
ကောင်းပါပြီ၊ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြံစည်မှုကိုတရား ၀ င်ရှုံးသည်။ သန့်ရှင်းသောမိသားစုအချိန်၌မေရီသည်သူမ၏ခင်ပွန်းမီးဖိုချောင်ကောင်တာတွင်ထိန်းကိုထိန်းနေသည်ကိုတွေ့မြင်ရန်အော်ဟစ်နေသည်။ ကလေးတွေငိုနေကြတယ်ငါလည်းငါဖြစ်၏။ အားလုံးငရဲချောင်ကျိုးပဲ့ခဲ့သည်။
17. ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းပင် NANNY ကုမ္ပဏီအလုပ်လုပ်သည်
ဟုတ်ပါတယ်သူမမ! ကျွန်တော်သိနှင့်နေတယ်! ဒီမိန်းကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမရှိဘူး။ ဒုတိယမာရိကသူမကိုသူတို့အိမ်ထဲ ၀ င်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီးသူမမျက်နှာကိုငေးကြည့်နေမိသည်။ ဘာကြောင့်လဲမေရီကိုဘာကြောင့်ချက်ချင်းထုတ်မပေးတာလဲ။ သူမပွော။ သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမသိဘူး။ သူမလိမ်တယ် သူသည်သင့်ကလေးများပြီးနောက်ကြည့်နေသည်။ ပျားရည်ပေးပါ။ သင်၏အိမ်မှသူ့ကိုထပါ။ NOW
18. Elaine သေပြီ !!!!!!!!!!!!
အခုဆိုရင်မာရိရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေသေဆုံးသွားသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ၊ ဤရုပ်ရှင်သည်လျင်မြန်စွာထိန်းချုပ်။ မရတော့ပါ။ ဒါတွေအားလုံးဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ။ ယခုမှာ, မေရီ Elaine ရဲ့ရုံးခန်းသို့မဟုတ် Grace သူမ၏အဖြစ်ဝတ်ဆင်ကနေ CCTV အပေါ်ထွက်လမ်းလျှောက်ကြောင်းဖြစ်သနည်း ဤရုပ်ရှင်သည်၎င်း၏ခေါင်းကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးရိုးရိုးသားသားအတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ဂရေ့၏မိသားစုဒီတော့ creepy သို့မဟုတ်ဖြစ်ဘို့ 20. ကလိုအပ်ခဲ့သလား
တနည်းကား, ငါတို့မယ့်တကယ်တော့များအတွက်မည်သည့်အခြေအနေတွင်တယ်ဘယ်တော့မှတစ်ခုခု, ဒါကြောင့်ဂရေ့၏မိသားစုပဲငါ့အအိပ်မက်တွေကိုသရဲခြောက်ဖို့အတွင်းပစ်ချခံခဲ့ရသည်တူသောကြောင့်ပုံရသည်။ Netflix ကိုချီးကျူးပါ၊
21. ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း Tom
အဆုံးနီးပြီ။ အခုတော့ဂရေ့စ်ဟာ Tom ကိုထိုးနှက်နေတယ်။ Tom နှင့် Grace တို့အကြားတေးဂီတနှင့်ထူးဆန်းသောစကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုသည်ထူးဆန်းသော American Horror Story-Ryan Ryan Murphy ကဲ့သို့သောခံစားမှုမျိုးကိုစတင်ခံစားနေရသည်။
၂၂။ မေရီကဂရေ့စ်ကို ၉၁၁ ကိုဖုန်းဆက်ပါ့မယ်
သင်ရုံသူမက [ဂရေ့] အန္တရာယ်ရှိသည်ယုံကြည်ဖို့အကြောင်းပြချက်နှင့်အတူ lilil စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပေါ်ခဲ့တာ, သင်သည်သင်၏အိမ်သို့ပြန်လာနှင့်သင်၏ခင်ပွန်းကြမ်းပြင်ပေါ်မှာထက်ဝက်သေပြီသင်အကူအညီနဲ့မြည်မဟုတ်ပါဘူး? အဲဒီအစားသင်ကဖြစ်ကောင်းဒီကိုပြု။ , ထိုသို့ပြုမှဓားနှင့်အတူလက်နက်ကိုင်သူရူးနေတဲ့, ယုံကြည်စိတ်ချ? သူမကလူနာတင်ကားသို့ဖုန်းဖြင့်ပုံနှစ်စက္ကန့်လုံးဘာကြောင့်ကုန်တာလဲဟုမေးခွန်းထုတ်သည်မဟုတ်လော။ ဒီလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ဘုရားတွေအကုန်လုံးပျက်စီးသွားပြီလား?!
၂၃။ နိုးနိုးကြားကြားရှိလှုံဆော်နေသော Robin အရာ
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမိန်းကလေးဘယ်သူလဲ၊ ငါ့အိပ်မက်တွေကိုထာဝရထွန်းကားစေမယ့်ဒီ switchy creepy အသံအရာကိုဘာကြောင့်လိုအပ်ရတာလဲ။ ငါစိတ်ဓါတ်များပြန်နှင့်ထွက် switching စောင့်ရှောက်ပုံကိုခြေရာခံစောင့်ရှောက်လို့မရပါဘူး။ ဒီနေရာမှာအစာကြေဖို့အများကြီးရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါမျက်တောင်ခတ်သောသူသည် meme ကဲ့သို့ငါ၏မျက်နှာပြင်မှာအဆက်မပြတ်ကြည့်နေပါတယ်။
24. ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းသူမကမာရိကိုသတ်ပစ်မယ်ဟုဆိုသည်, ဒါကြောင့်သူမပေါ့ပေါ့တန်တန်ဝေးပြေးနေသည်
သူမဓားပြတစ်ကောင်နှင့်အတူသတ်ဖြတ်သောစိတ်ပညာဖြင့်ဝေးစွာလမ်းလျှောက်ရင်းမေရီသည်နောက်ကွယ်တွင်စစ်ဆေးရန်ရပ်လိုက်သည်။ တစ် ဦး က Move GET ။ ယခုမှာသူမသေချာသည်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။
အဘယ်အရာကိုအစားအစာ Processor မှထွက်ပျံ? ဂရေ့စ်ကဘယ်သူလဲ။ ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းအတွင်းဤသည်အခြားလူတစ် ဦး ကဘယ်သူလဲ ငါသာပဲမှပြန်လည်ကောင်းမွန်ပါတယ် သူမ၏မျက်လုံးနောက်ကွယ်မှ ငါမရင်ဆိုင်နိုင်ဘူးနောက်တဖန်ငါ့ကိုဤပစ္စည်းပစ္စယမျိုးမပေးပါဘူး။
၂၆။ အခုမာရိကသူမကိုချစ်နေတုန်းပဲ၊ သူမကိုယုံနေပြီလားလို့ပြောနေတာလား။
ဒါဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း (သို့မဟုတ်သူမအမှန်တကယ်မည်သူမဆို) မာရိရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေကိုသတ်, အသေဘို့သူမ၏ခင်ပွန်း left နှင့်သူမ၏သတ်ပစ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီးနောက်မာရိငါအရမ်းချိုမြိန်မိန်းကလေးကိုချစ်ဟုဤနေရာတွင်ထွက်သည်။ ဘာလဲ????? အဆင်ပြေသလား????? ဒီမိန်းကလေးသွားကြစို့။ သူမအိမ်မှာလုံခြုံမှုမရှိဘူးဘာလုပ်နေလဲ ??? !!!
၂၇ ။ တောင်မှဘာကိုဆိုလိုတာလဲ
Deadly Illusions ရဲ့အဆုံးမှာဂရေ့စ်ကိုအခုကုသနေတဲ့ဆေးရုံကထွက်လာတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ မာရိလား။ အဲဒါကျေးဇူးတော်လား။ ငါအရာအားလုံးကိုဘာမျှမစောင့်ကြည့်ခဲ့သလား ကျေးဇူးပြု? အကူအညီပို့မလား
သေစေနိုင်သော Illusion Netflix တွင်ယခုရနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ် Netflix သတင်းများ၊ ဉာဏ်စမ်းပဟေ,ိများ၊ အစက်အပြောက်နှင့်မှတ်စုများအတွက် Facebook ပေါ်မှာ Netflix ၏သန့်ရှင်းသောဘုရားကျောင်းလိုပဲ။
• Deadly Illusions နိဂုံးကရှင်းပြခဲ့သည် - ဒီအရာအားလုံးဟာငရဲမှာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
• Netflix ရှိ Deadly Illusions သည်မည်မျှအထိနက်ရှိုင်းသည်ကိုစုစည်းထားသော ၂၉ ခုမျှသာဖြစ်သည်